Ururada Bulshada Rayidka Ayaa Soo Jeediyay In Shirka 15-ta Febraayo Lagu Qabto Muqdisho – Great Banaadir
MUQDISHO (WBW: The GBM) – Ururada Bulshada Rayidka ayaa lagu soo waramayaa in ay soo dhaweeyeen shirka lagu baaqay in uu qabsoomo 15-ta Febraayo ee sanadkan, waxeyna sii taageereen in shirkaasi uu ka qabsoomo Magaalo Madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Shirka 15-ta Febraayo ee sanadka 2021-da, waxaa markiisii hore ku baaqay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee waqtigiisa dhamaaday 8-dii Febraayo ee sanadkan 2021-da, wuxuuna doonayay in shirka lagu qabto Xarunta Dowlad Goboleedka Puntland ee Garoowe, iyadoo ay shirka isugu imaanayaan Dowladda Dhexe ee Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir. Ha yeeshee, waxaa ka diiday Dowlad Goboleedka Puntland ee Soomaaliya, iyadoo isla markaasina ay ku baaqday in shirka uu ka qabsoomo Muqdisho; si dhammaan dhinacyada aan looga maarmin shirka ay uga qeybgalaan.
Ugu dambeynti, dhinacyada aan looga maarmin ka-qeybgalka shirka waxaa kamid ah Ergiga Gaarka ee Xoghayaha Guud ee Qaraamida Midoobay ee Soomaaliya, Ergiga Gaarka ee Ururka Midowga Afrika ee Soomaalia, Midowga Murashixiinta Madaxweynaha Soomaaliya, Uruada Bulshada Rayidka ee Soomaaliya.
Warbaahinta Banaadir Weyne (WBW: The GBM [The Great Banadir Media]) waxaa markasta lagala socon karaa warar xiisa leh isla markaana aad usii kulul.